Depreciation of Knowledge! - IT-KOKO
အစတုန်းကတော့ java ကို ကျောင်းမှာသင်ခဲ့တာတွေရေးမယ်ဆိုပြီး စရေးခဲ့တယ်.. နောက်ပိုင်း assignment ကိစ္စနဲ့ ကောင်းကောင်း ဆက်မရေးဖြစ်ဘူး.. နောက်တစ်ခုက ဘားမှ ရေရေရာရာ မသိပဲနဲ့ ရေးနေတာ မကောင်းသလို့ဖြစ်နေတယ်.. အရင်လေ့လာပြီးတော့မှ သေသေချာချာ ပြန်ရေးမယ်လို့ စဉ်းစားမိလာလို့။ နည်းနည်းသိပြီးများများ ပြောနေသလို့ ဖြစ်နေသလို ခံစားရလာလို့ ဆက်မရေးဖြစ်တော့ပဲ ဒီအတိုင်းထားလိုက်တာ။ သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ကျွန်တော် ဘယ် Programming Language ကိုမှ ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် မသိဘူးဆိုတာပဲ။ ကျောင်း ပထမနှစ်မှာ Python Programming ကိုသင်ခဲ့ရတယ်.. ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နားလည်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်.. နောက်ပိုင်း ဆက်မလေ့လာ ဖြစ်တော့ဘူး။ ကျောင်းပြီးတာနဲ့ မေ့ထားခဲ့လိုက်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ပြန်လုပ်တော့ ဘယ်က စရေးရမလဲ မသိတော့ဘူး။ Junior လေးတွေကမေးတာကို ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလည်းမသိခဲ့လို့ တော်တော် ရှက်ခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းကသင်ပေးတယ်ဆိုတာ မုန့်တစ်ခုကို အမြည်းကျွေးလိုက်သလိုပါဘဲ. စားလဲစားပြီးတော့ မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုလည်း မလုပ်တက်ဘူး။ ကောင်းကောင်းတော့စားခဲ့တယ်။ ကြိုက်လည်းကြိုက်ခဲ့တယ်။ လုပ်လည်းလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတဲ့နည်းကို သေသေချာချာ မသင်ခဲ့မိဘူး။ လုပ်ပြီးရင် ပြီးရောဆိုပြီး အထင်တွေကြီးနေခဲ့တယ်။ နောက်ထက် ဘာတွေရှိသေးလည်းဆိုတာကို မလေ့လာခဲ့သလို၊ အရင်သိထာတာတွေကိုလည်း မလေ့ကျင့်ခဲ့ဘူး။ နောင်ဆုံးတော့ ဘားမှမသိတဲ့ ကောင်ကြီးဖြစ်သွားရော.. သင်ထားတာတွေက အလားကားဖြစ်သွားတာပေါ့။
အသိတစ်ခုတော့ရလိုက်ပါပြီ။ ဘာလည်းဆိုတော့ သိသလိုလိုနဲ့ တကယ်ဘားမှမသိတာပဲ။ မသိဘူးလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး သိတယ်။ သိရင်လုပ်ဆိုတော့လည်း ဘားမှမလုပ်တတ်ဘူး။ တော်တော့်ကိုး ရှုံးတယ်လို့ဆိုရမယ်။ သင်ပြီးသာတွေကို ဆက်မလေ့ကျင့်၊ မလေ့လာတော့ အချည်းနှီးဖြစ်တာပေါ့။ IT ကျောင်းသားတစ်ယောင်ဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ် Programming Language မှ ရေရေရာရာမသိတော့ မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်။ ပြီးတော့ သင်ပြီးတာနဲ့ တတ်သွားပြီလို့ ပြောလို့မရဘူးလေ။ ငါ ဒီစာကို သင်ပြီးသွားပြီပဲ ငါအကုန်သိနေပြီ၊ တတ်နေပြီလို့ ပြောနေလို့မှမရတာ။ နောက်ပိုင်း ထက်လေ့လာမှု့တွေ မရှိရင် သင်ပြီးထားတာလည်း အလကားပဲ။ သင်တယ်ဆိုတာ မသိတဲ့လမ်းတစ်ခုရဲ့ အဝင်ဝကိုပို့ပေးသလိုပဲ။ ဆက်သွားရင် လမ်းဆုံးကိုရောက်မယ်။ ရပ်နေရင် ဘယ်မှမရောက်ဘူး။ နောက်ပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အရှုံးပေတာပေါ့။ ကျွန်တော်က ရပ်နေတဲ့ စရင်းထဲမှာပါနေတယ်လေ။ ကျွန်တော့ သိထားတာတွေကDepreciation ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါဟာလုံးဝမဖြစ်သင့် တဲ့ကိစ္စပဲ။ အသိပညာ အတတ်ပညာဆိုတာ တိုးတတ်လာတာပဲရှိရမယ်လေ.. လျော့သွားတယ်ဆိုတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး။
အမှားတွေ့ရင် ချက်ချင်းပြင်၊ အမှန်တွေ့ပေမဲ့ ရပ်မနေနဲ့၊ ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ဆက်ကြိုးစား
အိမ်မှာကပ်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို တောင် ပြေးမြင်တယ်။ အမှားတွေ့ပြီဆိုရင် ပြင်ဖို့စဉ်းစာမနေပါနဲ့ ချင်ချင်းသာ ပြင်လိုက်ပါ။ ပြင်ပြီးတာနဲ့ အားလုံး ကောင်းသွားပြီလို့ အဆိုနိုင်ဘူး လေ။ အမြဲကောင်းဖို့ နောက်ထက် ထက်မမှားဖို့ က အမြဲကောင်းနေအောင် ဆက်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ သိပြီးသားတွေကို ဆက်မလေ့လာရင် မေ့သွားတတ်သလို၊ ပြင်ပြီးသားအမှားကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်ဆက် မကြိုးစားရင် နောက်တစ်ခါ ထက်မှားနိုင်တယ်ဆိုတာ သိစေချင်တယ်။ သိပြီးတာတွေကို ပိုပိုသိအောင် ဆက်လုပ်နိုင်ပါစေ။ ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ဆက်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။ ဆုတောင်း ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ တိုက်တွန်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်…